> Resource > Flash Drive > Sidee inuu ka soo kabsado ka dib markii Data Error Qaabka USB
Fadlan caawi i bogsii Data ka dib markii Error Qaabka USB!
Dhawaan markii aan ku xirnayn aan USB flash drive galay dekedda USB aan computer ii sheegay in aan u baahan tahay inaad qaab. Markii aan rabnay inaan qaab, waxa uu sheegay in anigu ma aan qaab yaabaa. Anigu taas waxaan isku dayay 3 kombiyuutarada kala duwan laakiin waxaan weli ma u heli karaan. Flash waxa uu leeyahay shaqo koorso oo dhan ayaan u Isniinta. Fadlan ii caawin! Waxaan u baahanahay inaan dib u helo shaqo.
Isdeji. Waxa ay u muuqataa in aad flash drive kharribmay. Haddii aad flash drive uusan xitaa muujiyaan in maamulka disk, Waxaan ka cabsi qabaa drive la jebiyey oo mar dambe ma aad dib u soo ceshano karaan macluumaadka ku yaal. Laakiin haddii aad flash drive ka muuqda suuqa kala kaliya oo aadan u furi karin, waxaad noqon doontaa nasiib ay dib u hanato xogta aad. Maxaa yeelay, dhammaan faylasha ayaa weli aad flash drive oo ay mar walba waxaa jiri ilaa iyo inta aanay jirin xog cusub ku wadid aad USB iyaga overwrites.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo soo kabashada ee Internet-ka ee aad ka bogsato xogta ka dib qalad qaab USB. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan oo aad ka heli kartaa si uu u xaliyo baadi qaab USB. Waxay kaa caawinaysaa in aad ka bogsato oo dhan qaabab faylasha ka USB flash drive qaladka qaab 3 talaabooyin fudud, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, files music, waraaqaha, iwm Waxaa si buuxda la jaan qaada flash USB drive, ul USB, kaadhka xusuusta, iwm
Waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah si uu u xaliyo baadi qaab USB hadda.
Kabsado Data ka dib markii Error Qaabka USB in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Fadlan ha isku dayin in qaab drive USB markii qalad ay tani dhacdo, sababtoo ah tallaabada laga yaabaa in gebi ahaanba musuqmaasuq aad drive iyo xogta aad karaa mar dambe loo soo celiyo.
Waxaan idin tusin doonaa sida loo sameeyo USB kabashada xogta baadi qaab la Wondershare Data Recovery for Windows. Waxay leedahay howlgal la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Select hab kabashada si uu u xaliyo baadi qaab USB
Bilowga, marka aad soo dajiyo iyo abuurtaan barnaamijka on your computer, waxaa lagu siin doonaa 3 kabashada hababka: "lumay Recovery File", "Recovery ah Barzakh," iyo "Recovery File ceeriin ah".
Si aad u soo kabsado xogta ka dib qalad qaab USB, aynu dooran "lumay Recovery File" mode hore.
Tallaabada 2 baarista USB flash drive
In tallaabadaas, aad USB flash drive la soo bandhigi doonaa sida drive ka furmo. Waxaad ku dooran kartaa oo guji "Start" si aynu barnaamijka faylasha scan ku yaal.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka dib qalad qaab USB
Ka dib markii iskaanka, files aad qalad qaab USB drive lagu soo bandhigi doonaa "Jidka" iyo qaybaha "File Type".
Waxaad ka arki kartaa magacyada file asalka ama images Falanqeynta in lagu hubiyo sida badan faylasha lagu soo kabsaday kartaa qaab baadi USB drive.
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad calaamadeyso faylasha aad rabto oo guji "Ladnaansho" button iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha sii xogta dib si aad u qaab baadi USB drive si looga fogaado in xogta overwritten.